Soomaalida Koonfur Afrika oo u safrayMagaalada Harare si ay u dhiiragaliyaan xiddigaha Ocean Star - Latest News Updates
Soomaalida Koonfur Afrika oo u safrayMagaalada Harare si ay u dhiiragaliyaan xiddigaha Ocean Star
Boqolaal muwaadiniin Soomaali ah oo ku nool Koofur Afrika ayaa ku jira diyaar garowgoodii ugu dambeeyay ee ay ugu safri lahaayeen Harare, ka hor inta aysan Soomaaliya ka dhicin dagaalka ay kula jiraan Zimbabwe maalinta Talaadada.
Hogaamiyaha jaaliyada soomaaliyeed ee South Africa, Amir sheikh iyo u dhaqdhaqaaqaha muhiimka ah ee bulshada Aydrus Ismail oo ay weheliyaan xubno kale oo firfircoon oo ka mid ah jaaliyada soomaliyeed ee kudhaqan koonfur afrika waxay qaateen hawl aad u balaadhan oo ah sidii boqolaal soomaali ah ay ugu safri lahaayeen wadanka Zimbabwe.
Waxaan sameynay dhammaan qaban qaabada safarkayaga. Waxaan ku jirnaa wadada Harare, waa howl qaran oo aan qabanayno, maadaama aan ku faraxsanahayno gawaarida xamuulkeena ah “xubin muhiim ah oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika, ayuu yiri Aydrus Ismail.”
“Waa geesiyaasheena waana qoraayaal taariikh. Aad ayaan ugu faraxsanahay iyaga waana ku kalsoonahay inay mar labaad guuleysan karaan ”Mr Aydrus Ismail ayaa raaciyay.
Taageerayaasha Soomaaliyeed ayaa ku safri doona labadaba wado iyo hawo. Kuwa ku safraya wadada ayaa durba bilaabay safarkooda Harare. Tani waa markii ugu horreysay taariikhda ee ay Soomaalidu waddan uga safraan dal si ay ugu farxaan xiddigaha Ocean.